तपाईँले चलाईरहेको इन्टरनेट कहिलेकाँही किन सुस्त गतिमा चल्छ ? यस्तो छ कारण - Technology Khabar
» ताजा समाचार » तपाईँले चलाईरहेको इन्टरनेट कहिलेकाँही किन सुस्त गतिमा चल्छ ? यस्तो छ कारण
अहिले प्रायजसो मान्छेहरु घरमा नै बसेर अफिसियल कामहरु गरिरहेका र यहि बेला बच्चाहरुको पनि स्कूल कलेज बन्द हुँदा इन्टरनेटको माध्यमबाट अनलाईन क्लासहरु भईरहेको हुन्छ । साथै घर बस्ने अरु सदस्यहरुले पनि सोही समयमा नै समय कटाउन फेसबुक, टिकटक लगायत अरु मनोरञ्जनका साधनहरु इन्टरनेटबाट हेर्ने गरेको देखिन्छ । अर्को कुरा युटुबमार्फत भिडियो हेर्ने गरेको पनि देखिन्छ ।
हाम्रो घरमा जडित इन्टरनेटको लागि चाहिने राउटर अथवा डिभाइस सबै इलेक्ट्रोनिक सामान हुन्, जुन लगातार रुपमा प्रयोग गर्दा यिनीहरुको कार्यक्षमता क्षय हुँदै जान्छ र यिनीहरुले गर्ने कामको गतिमा सुस्तता आउँछ, त्यसैको फलस्वरूप हाम्रो घरमा जडित सेवा प्रदायकको इन्टरनेटको गति सुस्त भएको आभाष हुन्छ ।
हामी दिग्भ्रमित भएर सेवा प्रदान गर्ने सेवा प्रदायकलाई त्यसको बारेमा गुनासो गर्न थाल्छौं, अनि सेवा प्रदायकको सपोर्टमा बस्ने सम्बन्धित प्रतिनिधिले केहि समय त्यो राउटर अथवा डिभाइसलाई अफ गरेर अन गर्नु भन्छन् । यसको मतलब के हो भने, यसो गर्दा तातेको डिभाइस बिस्तारै सेलाउँदै जान्छ र फेरी आफ्नै पुरानो कार्यक्षमता अनुसार काम गर्न थाल्छ ।
अर्को इन्टरनेटको गति सुस्त हुने कारण तपाई हामीले नै प्रयोग गरिरहने मोबाइल, ल्यापटप, ट्याबलेट, कम्प्युटर लगायतका सामग्रीहरुको कार्यक्षमतामा पनि भरपर्छ ।
सबै प्रयोगकर्ताको एकै प्रकारको क्रयशक्ति हुँदैन, कसैले आफ्नो क्रयशक्ति अनुसार लाखौ पर्ने सामग्री प्रयोग गरिरहेका हुन्छन भने पक्कै पनि जुन कुराको कार्यक्षमता नै राम्रो छ र महँगो छ, त्यसको काम गर्ने क्षमता पनि उच्च नै हुन्छ । त्यस्ता प्रयोगकर्ताहरु जो, उच्च लेभलको मोबाइल, ल्यापटप प्रयोग गर्छन, उनीहरुले अलि कमसल खालको राउटर वा डिभाइस प्रयोग नगर्ने हुँदा इन्टरनेटको गति सुस्त भएको निकै कम महसुस गर्छन् ।
अब सबैलाई उच्च गुणस्तरकै मोबाइल, ल्यापटप प्रयोग गर्नु भन्न त सकिँदैन । त्यसको प्रयोगकर्ता कोहि महिनाको लाखौं, करोडौं कमाउने हुन्छन् भने कोहि केहि हजारमा गुजारा गर्नु पर्ने पनि हुन्छन् । यो यथार्थ हो । त्यसैले मान्छेको आफ्नो-आफ्नो क्रयशक्तिको कुरा हुन्छ । तरपनि इन्टरनेटको प्याकेज लगायत, स्पीड सबैको एउटै समान हो ।
अर्को कुरो हामीले प्रयोग गर्ने राउटरमा पनि भर पर्छ । हामी लाखौं रुपैयाँ पर्ने मोबाइल लगायत ल्यापटपहरु किन्छौं तर अलि राम्रो कार्यक्षमता भएको राउटर किन्न एकदमै कन्जुस्याई गर्छौं ।
जब हामी सबै कुरा उच्च कार्यक्षमता भएको प्रयोग गर्छौ, लगभग ९९ प्रतिशत इन्टरनेटको गतिमा आफसेआफ सुधार आउँछ ।
(बडाल इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनी इस्टलिंक टेक्नोलोजी प्रालिका सञ्चालक हुन् ।)